Akụkọ - Ego ole ka ị maara maka onye ọrịrị?
Dị ka akpa nkwakọ ngwaahịa mmiri mmiri, akpa cheetainer n'ime igbe abụghị ọhụrụ, dị ka n'oge dị ka otu puku afọ ma ọ bụ abụọ gara aga ụmụ mmadụ maara otú e si eji ewu akpụkpọ anụ, herbivore offal (afọ) na-eme ka mmiri akpa maka mmiri, ma ndị dị otú ahụ ngwá na-anọchi na-adịbeghị anya site ọzọ adaba ike mmiri karama.
E jiri ya tụnyere kettle, nnukwu uru nke akpa mmiri ahụ bụ nchekwa dị mma, nchekwa mgbe a na-ejighị obere nha, anaghị ewepụta ohere, ịdị arọ dị arọ, ikike buru ibu, olu na-abụkarị ibu karịa kettle, n'ihi ya, ị nwere ike ibu ọtụtụ mmiri. . Ọ bụ ezie na mwepu bụ ihe ize ndụ nke ịbụ punctured, ma ugbu a plastic mmepụta technology emeela ka ohere dị otú ahụ belata ka ọ dị ala. Ejikọtara ya na nkwalite ugbu a nke ọgwụ egwuregwu egwuregwu, ya mere, ugbu a, e nwere ọtụtụ ndị na-anụ ọkụ n'obi n'èzí malitere iji akpa mmiri dị ka ngwá ọrụ na-ebu mmiri.
Ọtụtụ ndị ahịa na-atụle akpa cheetainer n'ime igbe dị ka zuru okè nnọchi nke cubitainer. N'ihi na akpa ụdị cube dabara nke ọma n'ime igbe ahụ, nke nwere otu ọrụ nke cubitainer. Akpa Cheertainer (ihe akpa: PA + PE) n'ime igbe nwere ike iji otu igbe dị ka cubitainer. Ọ na-ewu ewu na Japan, Korea na mba Europe n'ihi ịdị arọ, mbelata ọnụ ahịa na ihe gburugburu ebe obibi. Anyị kwenyere na cheetainer (akpa na igbe) nwere ike ịbụ usoro nkwakọ ngwaahịa mmiri. Mgbe ndị ahịa na-ekpebi ịgbanwe ụzọ nkwakọ ngwaahịa gị site na cubitainer gaa na-enwe obi ụtọ, ndị ahịa adịghị mkpa ịmegharị igbe ahụ n'otu olu na nha.
A rụpụtala ụlọ ọrụ anyị akpa cheetainer n'ime igbe kemgbe afọ 2017. Anyị nwere teknụzụ tozuru okè na ọrụ na-enye afọ ojuju maka ndị ahịa. Anyị na-ere ndị ahịa obi ụtọ n'ụlọ na esenidụt maka imeju kemịkalụ, nri, mmiri mmiri ụlọ ọrụ na ojiji ahụike. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị site na email akara na weebụsaịtị anyị.